नि:शुल्क कलहरूले कसरी कार्य गर्छन्?
प्रत्येक रिङ्गिट टप-अपले ग्राहकलाई 1 दिन निःशुल्क कलहरू दिन्छ। तपाईंले टप-अप गरेपछि छिट्टै आफ्ना निःशुल्क कलहरूका लागि SMS प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ। निःशुल्क कलहरू
मैले आगामी टप अपहरू सम्पादन गर्दा मेरा निःशुल्क कलहरू कसरी गणना गर्ने?
तपाईंको नि:शुल्क कलहरूको मान्यता अवधिले तपाईंको खाताको अधिकतम मान्यता अवधिलाई पछ्याउनेछ। बाँकी दिनभन्दा टप अप रकम ठूलो हुन्छ भने, त्यसपछि नयाँ म्याद समाप्ति मिति हालको मिति प्लस टप अप रकम हुन्छ। अन्यथा, म्याद समाप्ति मितिमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन।
उदाहरणका लागि, तपाईंले दिन 1 RM30 टप अप गर्नुभयो र तपाईंले दिन 15 मा RM10 को अर्को टप अप गर्नुभयो भने, तपाईंको नि:शुल्क कलहरूको मान्यता अझै 30 दिन हुनेछ 40 दिन होइन। यद्यपि, तपाईंले दिन 1 मा RM30 टप अप गर्नुभयो र तपाईंले दिन 25 मा RM10 को अर्को टप अप गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईंको नि:शुल्क कलहरूको मान्यता अवधि दिन 35 सम्म मान्य हुनेछ।
मैले आफ्ना निःशुल्क कलहरू प्रयोग गर्न कहिले सुरु गर्न सक्छु?
तपाईंले “नि:शुल्क कलहरू” SMS सूचना प्राप्त गरेपछि आफ्ना नि:शुल्क कलहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। नि:शुल्क कलहरूको गणना दैनिक आधारमा मध्य रात 12 बजे रिसेट हुन्छ।
मैले गर्न सक्ने नि:शुल्क कलहरूको संख्यामा कुनै सीमा छ? कुनै ‘साथीहरू वा परिवार’ सेटिङहरू आवश्यक छ?
छैन, तपाईंले सबै U Mobile नम्बरहरूमा कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरा भनेको U Mobile बाट टप-अप गर्ने हो। कुनै विशेष सेटिङहरू आवश्यक पर्दैन।
मैले भ्वाइस कलहरूबाट UMI बन्डलमा पनि सदस्यता लिन्छु भने मेरो दैनिक नि:शुल्क 10 मिनेट अन-नेट कलहरूमा के हुन्छ?
तपाईंको UMI बन्डल भ्वाइस कलहरू पहिले उपयोग गरिनेछन् र त्यसपछि तपाईंका दैनिक नि:शुल्क कलहरू प्रयोग गरिनेछन्।
App-Onz भनेको के हो?
App-Onz ले सामाजिक एपहरू जस्तै Facebook, Instagram र Twitter का लागि नि:शुल्क असीमित डाटा प्रस्ताव गर्दछ।
मैले नि:शुल्क असीमित App-Onz कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
न्यूनतम RM10 को एकपटक टप अप सम्पादन गर्नुहोस्, तपाईंले तुरून्तै App-Onz का लागि नि:शुल्क असीमित डाटा प्राप्त गर्नुहुनेछ। App-Onz का लागि नि:शुल्क असीमित डाटाको आनन्द लिन जारी राख्नका लागि टप अप गरेर सक्रिय रहनुहोस्।
मैले एकपटक आफ्नो नि:शुल्क आधारभूत इन्टरनेट कोटा उपयोग गर्न समाप्त गरेपछि मलाई शुल्क लगाइनेछ?
लगाइनेछैन। यद्यपि, तपाईं अब उपरान्त कुनै इन्टरनेट सेवाहरू उपयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछैन।
मैले आफ्नो मोबाइल लाइन प्रयोग गरेर हटस्पट वा टेथरमार्फत App-Onz आफ्ना साथीहरूलाई साझा गर्न सक्छु?
सक्नुहुन्छ, तपाईंले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ।
नि:शुल्क इन्टरनेटको मान्यता अवधि के हो?
नि:शुल्क इन्टरनेटका लागि मान्यता अवधि निम्नलिखित छन्:
सक्रियकरण गर्दा नि:शुल्क इन्टरनेट (200MB) 10 दिन (सुरुवाती प्याक सक्रियकरण गर्दा)
नि:शुल्क आधारभूत इन्टरनेट महिनाको प्रत्येक पहिलो दिनमा रिसेट गर्न